Gcwalisa iselula ngeCubacel
Inkampani yaseCuba ICubacel yethulwa kuleli ngo-1991, yakha umnyango we-ETCSA futhi inikeza isevisi yomakhalekhukhwini esiqhingini sonke, ehlanganisa amadolobha amakhulu ezwe, nge-2G GSM kanye ne-WCDMA 3G.
Inikeza izingcingo zikazwelonke nezamazwe ngamazwe, idatha yeselula yokufinyelela ku-inthanethi, i-MMS, i-SMS, ukudluliswa kwebhalansi, ukuzulazula kanye nokufinyelela kusevisi yokubonisana nge-imeyili.. ICubacel inezinga layo elikhokhelwa ngaphambili ukuze ukhokhe kuphela lokho okushoyo.
Nge-Cubacel, kungenzeka ukuthi ufinyelele i-inthanethi ngenethiwekhi yeselula kusukela ngo-2018 futhi ukhokhise kabusha, inkampani inezindawo zobuso nobuso, ishajwa kabusha nge-inthanethi, ngamakhadi kanye namahhovisi ezentengiselwano.
Ukushaja kabusha iselula ngeCubacel kulula kakhulu. Uma ufuna ukwazi izindlela ezihlukene zokwenza, qhubeka ufunda okuthunyelwe kwethu, lapha sizokutshela ngendlela elula ukuthi ungashaja kanjani ngayinye yezindlela ezitholakalayo.
Ungashajwa kanjani kabusha iselula ngeCubacel
Uma uyisakhamuzi saseCuba noma unezihlobo esiqhingini, ukushaja kabusha iselula yakho kuyadingeka ukuze uhlale uxhumekile. Nokho, kwezinye izimo lokhu kungase kube inqubo nzima, kodwa ngokushajwa kabusha kweCubacel kuzothatha imizuzwana embalwa kuphela, kulula kakhulu futhi kuphephile.
Izinhlobo zokushajwa kabusha
Ukuze kube lula kumakhasimende ayo, iCubacel inikeza izinhlobo ezahlukene zokushajwa kabusha kweselula, phakathi kwazo okukhona:
Gcwalisa ngamakhadi akhokhelwa ngaphambili
Ngamakhadi akhokhelwa kusengaphambili noma gcwalisa kabusha ungakwazi ukwengeza ibhalansi kuselula yakho ngamanani 5, 10 kanye 20 Cuban pesos convertible. Uzodinga kuphela ukuthola ikhadi elinenani elizoshajwa futhi ulandele imiyalelo evela ngemuva.
Lawa makhadi angatholakala kunethiwekhi yezohwebo ye-ETECSA. Ukushajwa kabusha ngendlela yendabuko brand * 666 bese ulandela imiyalelo yomsebenzisi, uma ufuna i-maraca yokushajwa kabusha esheshayo * 662 * Ikhodi. finyelela #
Shaja kabusha emahhovisi ezentengiselwano
Uma ufuna ukushajwa kabusha ngokuqondile, ungaya ehhovisi lezohwebo lakwa-ETECSA uyothenga ikhadi lakho lokushajwa kabusha noma usebenzise uhlelo lwe-Transfermóvil, ngemali encane engu-5 yama-pesos aseCuba aguqukayo.
Shaja kabusha nge-Transfermóvil
I-Transfermóvil uhlelo lokusebenza lokukhokha oluku-inthanethi lwe-ETECSA olusebenzela amadivayisi we-Android. Ngokuthinta okukodwa uzokwazi ukufinyelela ohlelweni olulula noluvikelekile kulo ukuphatha izinsiza zamabhange, izinsiza zomphakathi kanye nezokuxhumana.
Ukulanda uhlelo lokusebenza iya kokulandelayo Iwebhusayithi ye-ETECSA bese uchofoza "Landa uhlelo lokusebenza lwe-Transfermóvil”. Khumbula ukuthi ukusebenzisa uhlelo uzodinga ucingo olunenguqulo yesistimu yokusebenza engaphezu kuka-4.4, kanye nebhodi lomama elivela eBhange oyingxenye yalo.
Ukugcwaliswa kabusha okuncane
Ukugcwaliswa kabusha okuncane a isevisi yokukhokha imali kulayini wakho wefoni okhokhelwa ngaphambili, ukukhulisa ibhalansi eyinhloko futhi inikezwa nge-Transfermóvil kanye nabasabalalisi kazwelonke. Le mali engenayo ingasuka ku-1 iye ku-4.99 CUC.
Shaja kabusha kusuka kuwebhu
Uma unekhompyutha ene-inthanethi, ukushajwa kabusha kuzoshesha futhi kuphephe kakhudlwana. ICubacel inesivumelwano nezingosi ezimbalwa ezisemthethweni lapho ungenza khona idiphozithi yemali kulayini wakho wefoni usebenzisa iwebhu. Ezinye zazo yilezi:
Shaja kabusha ngebhalansi ethuthukisiwe
Kusukela ngo-2019, ibhalansi yentuthuko yesevisi iyingxenye yocingo lweselula olukhokhelwa ngaphambili lwe-CubacelNgalokhu ungathuthukisa i-pesos eguqukayo engu-1 noma emi-2 yaseCuba. Vele ushayele u-*234 # kumakhalekhukhwini wakho bese ukhetha u-2.
Ungathola le sevisi kuwebhusayithi yeCubacel esigabeni I-akhawunti yami futhi kusukela Transfermóvil. Kodwa ukuze ujabulele izinzuzo zayo kufanele uhlangabezane nemibandela ethile, phakathi kwayo yilezi:
Ungabi nakho ukuthuthuka okulindile
Ibhalansi elingana noma ngaphansi kwamasenti angu-3
Ukungabi nawo Amaminithi atholakalayo, ama-SMS noma amabhonasi emali
Ishaje kabusha ezinyangeni ezimbili ezedlule
Izindawo zobuso nobuso phesheya
Uma uphesheya futhi unesidingo sokushajwa kabusha eCuba, manje ungakwenza ezindaweni ezithile zobuso nobuso ongazithola emazweni amaningana anjengalawa: Spain, US, Germany, Canada, Italy, United States. I-Kingdom, i-Bahamas ne-Ecuador.
Lawa mazwe angakwazi ukushajwa kabusha: izitolo, amakhioskhi, izikhungo zezingcingo, izitolo ezinkulu, izitolo ezidayisa ukudla, izindawo zokugcina izimpahla, amagalaji kaphethiloli, izikhungo zezokuvakasha, izitolo ze-Walmart, izindawo ezithengiswayo ze-Fullcarga. Khumbula ukuthi ozakwethu abangcono kakhulu ongabakhokhisa kabusha amakhadi esikweletu noma edebhithi.
Phezulu kuselula » Izinkampani » Gcwalisa iselula ngeCubacel
Shaja kabusha i-Claro Argentina
Ungayishaja kanjani i-Iliad
Ungayishaja kanjani kabusha i-Oi Brazil
Hlola ibhalansi yeselula Sichaza ukuthi kwenziwa kanjani isinyathelo ngesinyathelo!
Ungashajwa kanjani kabusha nge-DIGI mobil
Shaja kabusha iselula ye-Digitel